ဦးကျော်သူ ကိုဗစ် Positive သာ ဖြစ်နေသေး၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် | Duwun
ပရိသတ်တွေက အမြန်ဆုံးသက်သာဖို့ ဆုတောင်းပေးလို့နေပါတယ်။
ကိုဗစ် ရောဂါကို ခံစားနေရတဲ့ ဦးကျော်သူက လက်ရှိအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Photo : ကျော်််သူ
ဦးကျော်သူကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဝေဘာဂီ မှာ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ကတည်းက ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့တာပါ။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံနေရပေမယ့်လည်း ဦးကျော်သူရဲ့ ကျန်းမာရေး အ‌ခြေအနေက ကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့ ဦးကျော်သူကို အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ထွန်းကိုကိုက Duwun ကိုပြောပါတယ်။
“ဦးမောင်က အခုထိ positive ပါပဲ ။ တချို့က Negative ဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒီနေ့ ဦးမောင်ညနေပိုင်းက တင်ထားတဲ့ စာကလည်း အသင်းသားတွေမှာ ပိုးစစ်တာ Negative ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာပြီ တင်ထားတာပါ။ လက်ရှိ ဦးမောင်ရဲ့ အခြေအနေက ကောင်းပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့မှာလည်း ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းက အသင်းသားတွေကို ကိုဗစ် ရောဂါ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ Negative ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာနေကြောင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ညနေ (၅)နာရီလောက်က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
" N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး "N" ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ... ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့ ၊ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုးလှမ်းကြသလိုဖြစ်ကုန်မယ်။ သတိ! အသိ! အမြဲ ရှိ! ကျော်သူ( ခေတ္တ ဝေဘာဂီ)" ဆိုပြီး ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဦးကျော်သူဟာ နှလုံး ခွဲစိတ်ထားသူဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါ ရှိတဲ့အတွက် ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ သူ့ကို နာရေးကူညီမှု အသင်းသားတွေ၊ ပရိသတ်တွေကလည်း စိုးရိမ်နေခဲ့ကြတာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ ဆေးစစ်ချက် အဖြေမှာ Negative ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိသားစုဝင်တွေ၊ အနုပညာလောကသားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဦးကျော်သူအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို Comment မှာ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးကျော်သူပါဝင်တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းဟာ COVID-19 ကာလမှာ ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးကာကွယ်ရေးအတွက် ဆေးဖြန်းခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် တားဆီးရေး အတွက် ရေသယ်ကားများနဲ့ ကူညီပေးခြင်း၊ ရေရှားပါးတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ရေအလှူပြုခြင်း စတဲ့ ကုသိုလ်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်သူ အနေနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ ဒီအသင်းကြီးဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၀) ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ ဦးကျော်သူဟာ တစ်ချိန်က အကယ်ဒမီဆုတွေ ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။